मंगल ग्रहमा जान मन लाग्यो ? पृथ्वीका यी क्षेत्रमा जानुस् मंगल ग्रहमा पुगेजस्तै भान हुन्छ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
मंगल ग्रहमा जान मन लाग्यो ? पृथ्वीका यी क्षेत्रमा जानुस् मंगल ग्रहमा पुगेजस्तै भान हुन्छ
प्रकाशित मिति २४ असार २०७६, मंगलवार १८:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । रातो माटोको जमीन, कालो ज्वालामुखीको लाभाले बनेको बालुवा र गहिरो सुख्खा घाँटी । यहाँ त्यस्तो स्थानको चर्चा हुँदै छ जहाँ पुग्दा पृथ्वीको सट्टा मंगल ग्रहमा पुगेजस्तै भान हुन्छ ।
यो उत्तरी आइसल्यान्ड हो । पृथ्वीका धेरै मानिस मंगल ग्रह भ्रमणमा जान चाहन्छन् । धेरै देशका अन्तरिक्ष संगठनले मंगल ग्रहमा विभिन्न यान पनि पठाइसकेका छन् । अमेरिका र रुसजस्ता देशले मंगल ग्रहमा मानिसलाई पठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
तर, जो यस्तो मिशनको हिस्सा बन्न सक्दैनन्, तिनीहरु लागि पृथ्वीका केही भागमा भ्रमण गरी मंगलको अनुभूति लिन सक्छन् । किनकि, पृथ्वीका केही भूभाग यस्ता छन्, जुन मंगलसँग धेरै मिल्दछन् ।
चिलीको अटाकामा मरुभूमि
चिलीको अटाकामा मरुभूमिमा पहिला तामाका धेरै खानी थिए । हाल ती खानी बन्द भइसकेका छन् । यो क्षेत्र चिलीको एन्टोफागस्टा सहरको दक्षिणमा छ ।
यो क्षेत्रलाई पृथ्वीको सबैभन्दा सुख्खा क्षेत्र मानिन्छ । वर्षौंसम्म यहाँ एक थोपा पनि वर्षा हुँदैन । औसतमा यहाँ वार्षिक १० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ । त्यसैले यहाँको माटो अति सुख्खा छ ।
संसारको यस्तै ठाउँको खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक क्लेयर कजिन्स अटाकामा मरुभूमिको बाहिरी भूभाग मंगल ग्रहको धरातलजस्तै देखिने बताउँछन् । अहिले मंगल ग्रह पनि धेरै चिसो, सुख्खा, ढुंगैढुंगा भएको मरु ग्रह हो । यद्यपि, अटाकामामा त्यति गर्मी छैन जति मंगलमा छ ।
अटाकामामा राति तापक्रम शून्य डिग्री र दिउँसो ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ । मंगल ग्रहको तापक्रम भने माइनस १९५ देखि २० डिग्रीको बुचमा रहन्छ । तर, अटाकामाको माटोको रङ मंगलको जस्तै छ ।
त्यसैले नासा र यूरोपेली स्पेस एजेन्सीले मंगल ग्रहमा पठाइने रोभरको परीक्षण यही क्षेत्रमा गरेका थिए । नासाले यहाँको माटो खनेर अचम्मलाग्दा ब्याक्टेरियाको खोजी गरेको थियो । मंगल ग्रहमा पनि त्यस्तै ब्याक्टेरिया पाइन सक्ने नासाको आशा थियो ।
म्याकमर्डो ड्राइ भ्याली, अतार्कटिका
अन्तार्कटिकाको नाम लिने बित्तिकै समुद्रमा तैरिरहेको बरफको पहाडको सम्झना आउँछ । तर, म्याकमर्डो ड्राई भयालीमा भने बरफ नै छैन । यहाँको औसत तापक्रम माइनस १५ देखि माइनस ३० डिग्रीको बीचमा रहन्छ । यहाँ दशौं लाख वर्षदेखि वर्षा नभएको वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ ।
केही क्षेत्रमा हिउँको वर्षा भने हुन्छ । तर, हिउँको वर्षा पनि निकै कम हुन्छ र चिसोका कारण हिउँ पर्दापर्दै ग्यासमा परिणत हुन्छ । यस्तै अवस्था मंगल गह्रमा पनि हुन्छ । अन्तार्कटिकाको म्याकमर्डो ड्राई भ्यालीले हुरीबतासको आक्रमणलाई पनि सहन्छ । यहाँ हावाको गति ३२० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म पुग्छ ।
मंगलमा यति तीव्र हुरीबतास त चल्दैन । तर, जब त्यहाँ हुरीबतास आउँछ, त्यहाँको माटो धेरै हल्का भएकाले धुलोको मुस्लो नै आउँछ ।
मंगलमा तीव्र गतिको आँधीका कारण नासाको अपच्र्युनिटी रोभर नै खराब भएको थियो । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि म्याकमर्डोमा भने केही कीटाणु अझै अस्तित्वमा छन् ।
हेंक्सविल, युटा, अमेरिका
दक्षिण पश्चिमी अमेरिकाको कोलोराडोमा सिम्रिक रङको ढुंगाले बनेको एक पठार क्षेत्र देख्न सकिन्छ । यो क्षेत्रमा अन्तरिक्षसम्बन्धी विभिन्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
हालसालै क्यानडा र बेलायतका अन्तरिक्ष वैज्ञानिकले यहाँ मंगल ग्रहमा पठाइने रोभरको परीक्षण गरेका थिए ।
क्यानरी टापु, तेनरिफ
स्पेनको प्रसिद्ध क्यानरी टापुको निर्माण करीब तीस लाख वर्ष पहिले एक ज्वालामुखी विस्फोटबाट भएको थियो । यो हाल विश्वका प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये एकमा पर्छ ।
यहाँ मंगल ग्रहको धरातलजस्तो अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । टापुको ठीक बीचमा रहेको ज्वालामुखीको उचाइ ३,७१८ मिटर छ । यही ज्वालामुखीको विस्फोटबाट नै यो टापु बनेको हो ।
ज्वालामुखीको वरिपरि लाभाले बनेका गुफाहरु पनि छन् । यस्तै गुफाहरु मंगल ग्रहमा पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ । त्यस्तै, मंगल ग्रहमा भएका यस्ता गुफामा पानी पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
उत्तरी ध्रुवनजिकै रहेको यो क्षत्रे मंगल ग्रहसँग धेरै मिल्छ । यस क्षेत्रले हालको मंगल ग्रहका साथै त्यहाँको अर्बौं वर्ष पहिलेको अवस्थाको संकेत पनि दिन्छ । ज्वालामुखीको लाभाबाट बनेको गाढा रङको त्यहाँको माटोमा पानीको एक थोपा पाउन पनि गाह्रो छ । त्यसैले यहाँ केही पनि उम्रिँदैन ।
यहाँका चट्टानहरु मंगल ग्रहका चट्टानसँग धेरै मिल्दछन् । त्यसैले यूरोपेली स्पेस एजेन्सीले आइसल्यान्डमा आफ्नो मार्स रोभरको परीक्षण गरेको थियो ।
आइसल्यान्डबाट वैज्ञानिकहरुलाई मंगल ग्रहमा अर्बौं वर्ष पहिलेको अवस्थाको अनुमान पनि हुन्छ । यहाँको अवस्था धेरै हदसम्म मंगल ग्रहसँग मिल्ने र यहाँ रहँदा मंगल ग्रहमै भएको अनुभूति हुने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
यो ढुंगै ढुंगाले भरिएको मरुभूमि मध्यपश्चिम अस्ट्रेलियामा फैलिएको छ । यो निकै सुख्खा क्षेत्र हो । यहाँका राता चट्टानको बीचमा प्रायः बालुवाको थुप्रो भेटिन्छ ।
यहाँको अवस्था मंगल ग्रहको अवस्थासँग धेरै हदसम्म मिल्छ । त्यस्तै, यहाँ चल्ने तीव्र हावा र साना नदीले मंगल ग्रहमै रहेको महसूस गराउने बताइन्छ ।
पिलबरामा संसारकै सबैभन्दा पुराना चट्टानहरु छन् । यहाँ करीब ३ अर्ब ४० करोड वर्षपूर्व उत्पत्ति भएका जीवको निशान पनि मिलेको छ । मंगल ग्रहमा पनि यस्तै वातावरण हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ ।
बेलायतको उत्तरी क्षेत्रमा एक गाउँ छ । माथिबाट हेर्दा यो गाउँमा मंगल ग्रहसँग मिल्ने वातावरण त देखिँदैन । तर, यहाँको जमीनभित्र मंगल ग्रहमा जस्तै पोटास र नुनको खानी छ । यी खानीको सुरुङमाथि अचम्मलाग्दा संरचनाहरु बनेका छन् । खानी करीब एक किलोमिटरको गहिराइ मा छ । यहाँको नुनले कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई जीवित रहन दिँदैन । यहाँ हेलोफाइल नामक केही जीव भने छन् । यस्ता केही जीव मंगल ग्रहको कष्टकर अवस्थामा पनि आवाद हुन सक्ने अनुमान छ ।
आर्कटिकको नजिकै रहेको यो पठार क्षेत्र रातो बालुवा र गिट्टीले भरिएको छ । यहाको माटो देखेर धेरैलाई मंगल ग्रहको सम्झना आउन सक्छ ।
आर्कटिकको नजिक हुनाले स्वालबर्ड धेरै चिसो पनि छ । धेरै देशका अन्तरिक्ष वैज्ञानिक यहाँ विभिन्न प्रयोगका लागि आइरहन्छन् ।
दक्षिणी बेलायतको यो तटीय क्षेत्र मंगल ग्रहसँग पटक्कै मिल्दैन । तर, यहाँको माटोमा अत्यधिक मात्रामा सल्फर पाइन्छ ।
यहाँ अचम्म लाग्दा धेरै प्रकारा ब्याक्टेरिया पनि पाइन्छन् । यहाँ बगिरहेको एक नदी अर्बौं वर्षदेखि बगिरहेको अनुमान छ । यस्तै नदी मंगल ग्रहमा पनि पाउन सकिने सम्भावना वैज्ञानिकहरुले देखेका छन् ।
यहाँको माटोमा फलाम पनि अधिक मात्रामा पाइन्छ । अम्लीय माटो, पानी र फलाम मिलेर हेमाटाइट नामक धातु बन्छ । मंगल ग्रहमा पनि हेमाटाइट पाउने सम्भावना छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरु मंगलसम्बन्धी प्रयोगका लागि यो क्षेत्रलाई उपयुक्त मान्दछन् ।
यदि तपाईंलाई पनि मंगल ग्रहमा अभिरुचि छ भने यी क्षेत्रमा गएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
‘ब्रा-पेन्टी’ बेच्नै घृणा गर्ने समाजमा अजीवीको ‘सेक्स सप’
‘म आनन्दको व्यापार गरिरहेको छु’ ३३ वर्षिया आन्तरेस अजीवीले भनिन्। उनले यसाे भनिरहँदा उनी महिला र पुरुषको सेक्स टोए…
एप्पलको बजार मूल्य १० खर्ब डलर
आईपड, आईफोन र आईप्याडको उत्पादक कम्पनी एप्पलले बिहीबार अर्को कोसेढुंगा पार गरेको छ, अर्थात् बजार मूल्य १० खर्ब अमेरिकी…
बलिउडमा जाजरकोटकी सिजन पुन (हेरौँ १४ तस्बिर)
जाजरकोट जाजरकोटकी एक युवती भारतीय चलचित्र क्षेत्र वलियुडको एउटा चलचित्रमा नायिकाको भुमिकाका लागि अनुवन्धित भएकी छिन् । जाजरकोटको भेरी…
प्रेस काउन्सिलको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा : ‘श्रीमान’ यो त अति भएन र ?
काठमाडौं । संविधानले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ कि कस्ता मुद्दाहरु मात्रै संवैधानिक इजलासमा पुग्नेछन् भनेर । संवैधानिक…
कम्युनिष्टका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा : उपसभापति निधि
बार्सिलोना। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कम्युनिस्टका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति,…
तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख रुपन्देहीमा रहेकै दिन देवदहमा तरुणदलका कार्यकर्ताको हत्या
बुटवल । कुख्यात अपराधी मनोज पुनको प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिए पछि शान्त बनेको रुपन्देहीको देवदह क्षेत्र पुन अशान्त बनेको छ…